ဓာတ်မြေသြဇာပစ္စည်း၊ မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း - YiZheng
Zhengzhou Yizheng အကြီးစားစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ, Ltd ။ Henan ပြည်နယ်၊ Zhengzhou ၏အနောက်စက်မှုဇုန်ဥယျာဉ်တွင်တည်ရှိပြီး၊ စိုက်ပျိုးရေးပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ရေးနည်းပညာ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိရိယာများ၊ BB ဓာတ်မြေသြဇာစက်ကိရိယာများ၊ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှု။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခိုင်မာသောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစွမ်းရည်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားရှိသည်။ ဖောက်သည်များအားလုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်း၊ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာစက်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ရန်။
အမှိုက်များကိုမည်သို့ဆွေးမြေ့နိုင်မည်နည်း အိမ်များသည်သင်၏မြေသြဇာကိုအိမ်တွင်ပြုလုပ်သောအခါအော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစုဆောင်းခြင်းသည်မလွဲမသွေလိုအပ်သည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုစွန့်ပစ်ခြင်းသည်မွေးမြူရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်အကျိုးရှိပြီးချွေတာသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အိမ်လုပ်အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာတွင်ရရှိနိုင်သည့်ဆွေးနည်းနှစ်မျိုးရှိသည်။
ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းယနေ့ခေတ်တွင်မှန်ကန်သောစီးပွားရေးအစီအစဉ်၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းစတင်ခြင်းသည်တောင်သူလယ်သမားများအားအန္တရာယ်မဖြစ်စေသောဓာတ်မြေသြဇာများထောက်ပံ့ပေးမှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ မဟုတ်ဘူး ...
သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ အမေရိက၊ အင်္ဂလန်၊ ပြင်သစ်၊ ကနေဒါနှင့်အခြားနိုင်ငံများစွာတွင်သိုးခြံများရှိသည်။ အမှန်မှာ၎င်းသည်များစွာသောသိုးမြေ produces ဇာများထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကောင်းမွန်သောကုန်ကြမ်းများဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? သိုးမွေး quality အရည်အသွေးသည်တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးတွင်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ ...
ပထမ ဦး စွာကြက်သားချေးသည်အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာနှင့်မတူပါ။ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာသည်ပြိုကွဲခြင်း၊ ကစော်ဖောက်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ကောက်ရိုး၊ ကိတ်မုန့်၊ မွေးမြူရေးမြေ, ဇာ၊ မှိုအကြွင်းအကျန်နှင့်အခြားကုန်ကြမ်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။ တိရိစ္ဆာန်အညစ်အကြေးများသည်ကုန်ကြမ်းများထဲမှတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
Chain Plate Compost Turner ကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း
Chain plate compost Turner သည်အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ပြိုကွဲခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်စေသည်။ ၎င်းသည်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူပြီးအလွန်ထိရောက်မှုရှိသည့်အတွက်ဤဆွေးစက်ကိရိယာများကိုအော်ဂဲနစ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံသာမကလယ်ယာမြေများတွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုမပြုလုပ်မီစစ်ဆေးခြင်း◇ ...
အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်လက်တွေ့တွင်၊ ဆွေးအမှိုက်ပုံ၏ဖြစ်စဉ်အတွင်းရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ တဖကျတှငျ, ထိန်းချုပ်မှုအခွအေနေအပြန်အလှန်နှင့်ညှိနှိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငုပ်သောကြောင့်, ကွဲပြားခြားနားသော windrow အတူတကွရောနှောနေကြသည် ...
ဆွေး Turner စက်ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ?
စီးပွားဖြစ်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုကစော်ဖောက်ခြင်းအဆင့်တွင်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည့်အရေးပါသောစက်ကိရိယာများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားဆွေး Turner နှင့်ပတ်သက်သောအခြေခံဗဟုသုတအချို့၊ ..
နှစ်များတစ်လျှောက်အာဖရိကတွင်ကြက်မွေးမြူရေးတွင်လူကြိုက်များလာသော်လည်း၎င်းသည်အသေးစားလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကစွန့် ဦး တီထွင်သူလူငယ်များစွာသည်အမြတ်အစွန်းများကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်ကြီးမားသောအကျိုးတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်လာသည်။ ဘဲဥပုံ၏ကြက်လူ ဦး ရေ ...
ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေတိုးပွားလာပြီးမြို့ကြီးများကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှစားနပ်ရိက္ခာစွန့်ပစ်မှုများတိုးများလာနေသည်။ နှစ်စဉ်တန်ချိန်သန်းပေါင်းများစွာသည်ကမ္ဘာအနှံ့အမှိုက်များထဲသို့ပစ်ချနေကြသည်။ ကမ္ဘာ့အသီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အစေ့များ၊ အသားများနှင့်ထုပ်ပိုးထားသောအစားအစာများ၏ ၃၀% နီးပါးကိုနှစ်စဉ်စွန့်ပစ်သည်။
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကုသမှုနှင့်တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုခြင်းသည်လယ်သမားအများစုအတွက် ၀ င်ငွေများစွာရရှိစေရုံသာမကသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုလည်းပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာသည်ပိုးမွှားဓာတ်မြေသြဇာနှင့်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်ပါဝင်သည့်ဓာတ်မြေသြဇာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
သကြားဓာတ်သည်ကမ္ဘာ့သကြားထုတ်လုပ်မှု၏ ၆၅-၇၀% ရှိသည်။ ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်တွင်ရေနွေးငွေ့နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများစွာလိုအပ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်အမျိုးမျိုးတွင်အကြွင်းအကျန်များစွာကိုထုတ်ပေးသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အချဉ်ဖောက်ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေနိုင်ငံတစ်ရာကျော်ရှိသည်။
ဓာတုဓာတ်မြေသြဇာများသည်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများမှဓာတုဗေဒနည်းဖြင့်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ဓာတုဓာတ်မြေသြဇာ၏အာဟာရဓာတ်ဓာတုဓာတ်မြေသြဇာ pl များအတွက်လိုအပ်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရသုံးမျိုး ...
အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်လက်တွေ့တွင်၊ ဆွေးထုတ်လုပ်မှုတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ တဖကျတှငျ, ထိန်းချုပ်မှုအခွအေနေအပြန်အလှန်နှင့်ညှိနှိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကွဲပြားသောကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသော windrow အတူတကွရောနှောနေကြသည် ...
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းစားသုံးနိုင်သောမှိုများစိုက်ပျိုးခြင်းနည်းပညာတိုးတက်လာခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရန်continuousရိယာများဆက်လက်တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်စိုက်ပျိုးသည့်အပင်အရေအတွက်တိုးများလာခြင်းတို့ကြောင့်မှိုများသည်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်မှုတွင်ငွေသားအဓိကသီးနှံဖြစ်လာသည်။ မှိုကြီးထွားလာသည့်wasteရိယာတွင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစွာသည်မျိုးရိုးဗီဇဖြစ်သည်။
ဓာတ်မြေသြဇာခြောက်သွေ့စက်ကိုမရွေးချယ်မီသင်၏ခြောက်သွေ့မှုလိုအပ်ချက်များကို ဦး စွာဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်သည်။ အမှုန်များအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများ - စိုစွတ်သောသို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့သောအခါမည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများရှိသနည်း။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြန့်ဖြူးခြင်းကဘာလဲ။ အဆိပ်ဓာတ်၊ လောင်ကျွမ်းနိုင်သော၊ လုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်သည် ...
အိမ်လုပ်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာဖြစ်သည့်အခါအော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ Composting သည်မွေးမြူရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုစွန့်ပစ်ခြင်း၏ထိရောက်သောစီးပွားရေးနည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှိုက်အမျိုးအစား ၃ မျိုးရှိသည်။ ဖြောင့်ဖြောင့်၊ Semi-pit နှင့်တွင်း။ အပူချိန်၊ မိုးရေ၊ စိုထိုင်းဆမြင့်မားမှု၊